दूर्जेय चेतना: 2009
नव वर्ष: अन्तिम परीक्षाको वर्ष
सम्पूर्ण मेरा पाठक, शुभचिन्तकहरु र मेरो देशलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
नयाँ वर्ष सुरु हुदै छ। यो क्रम रोकिने पनि हैन तर हरेक समय जसो शुभकामनाको बहार पनि चलिनै रहन्छ। सधै जसो सबैको राम्रो होस, सबैको शुभ होस भनेर भनिरहदा; कयौ नराम्रा र नराम्रा दुबै कामहरु भएका छन्। तर मलाई यो वर्षको सुरुवात सगै नयाँ आशा पलाएको छ। केही त हुन्छ यो वर्ष। मुल्याङ्कनको दुबै दर्जामा बसेर हेर्दा केही नौलो त पक्कै हुन्छ जस्तो लाग्छ। शुभ वा अशुभ के हुने हो तर पनि शुभकै कामना गर्दा राम्रो र शान्ति होला मन र तन सबैलाई। कुरा प्रष्ट रुपमा देशकै गर्न खोजिरहेछु म आज पनि। निकै आशा छ हामीलाई यो वर्ष। हामीले नयाँ समाज र नयाँ दिनको कामना गरिरेहेका छौ। निकै लामो यात्रा तय गरिरहदा लाग्नु स्बभाबिक हो कि, हामीले निकै र अनेकौ हुने नहुने कुराहरुको आशा गरिरहेका छौ। शान्ति सुव्यवस्था र सभ्य समाजको कल्पना गरे अनुरुप काम गर्न यो वर्षले हैसियत राख्छ जस्तो लागिरहेको छ। यो वर्ष बास्तबमै हाम्रो लागि सहज छैन। हामीले सोचे जस्तो सरल र हेरेक वर्ष आदन प्रदान गर्ने शुभकामना भन्दा फरक नतिजा दिनु पर्ने छ यो वर्षले।
यो वर्षले हामीलाई नयाँ पहिचान दिने छ। हामी आशा गरौं सकरात्मक होस तर नकरात्मक हुन पनि सक्छ। हामी समयको यो बेग सगै कि त टाउको ठाडो गरेर बाच्ने नेपाली भएर वा शीर निहुराएर बाच्नु पर्ने युद्ध र द्वन्द्वका पारखी हुने कुराको निर्धारण गर्ने छ। हामी कि त मेलमिलाप र शान्तिको एक पृथक पहिचानको देश र हाम्रो सर्बब्यापी एउटै जात नेपाली र एउटै धर्म नेपाल राष्ट्रियता लिएर बाच्न पाउने छौ, कि त हजारौ टुक्रामा बाँडिएर, आफू सग भएको पनि गुमाएर निर्वस्त्र नाग्गो रुपमा विश्व सामु उभिन बाध्य हुने छौ।
यो वर्षले हामीलाई निकै शंकाको घेरामा उभाउने छ। हामीलाई ठूलो परिक्षा दिनु पर्ने छ यो वर्ष। साना साना त्रैमासिक परीक्षाको अन्तिम, ठूलो बार्षिक परिक्षाको समय हुने छ यो वर्ष। भईरहेको पुराना त्रैमासिक परीक्षाहरु बिगारेर तितो अनुभव गरिरहेका हामीलाई अन्तिम वार्षिक परीक्षाको लागि निकै काम गर्नु पर्ने पनि छ। तर निर्विकल्प रुपमा हामीलाई उत्तीर्ण बन्नु पर्ने यो वर्षले थप रक्तपात, युद्ध र द्वन्द्वको घेरामा हामीले जान नपरोस। यो बर्ष शान्ति-बालकको जन्मको लागि प्रसव वेदनाको बर्ष हुने छ हाम्री आमाको लागि। आशा गरौ, यो प्रसव वेदनाले नेपाल आमाको र शान्ति बालक कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस। जे भए पनि गर्नु पर्ने चाहिँ हामीले नै हो।
यहाँ न त
कुनै मानवको पुन:जन्म हुन्छ,
न त यहाँ नौलो सृष्टि आउँछ,
धीप्प धीप्प बलेको बत्ति जस्तो
आशा नभएको जीवन बनाईसके पछि
को नै पुन: लिन आउछ!!
कुनै ईश्बरको पुन: जन्म हुन्छ,
न त यहाँ नौलो ब्रम्हानै आउछ,
त्वाप्प त्वाप्प चुहेको पानी जस्तो,
आशा नभएको धारा भईसके पछि
को नै पुन: खोल्न आउछ!!!
कुनै आशाको पुन:जन्म हुन्छ,
न त यहाँ कुनै मधु र मालती नै आउछन्,
ढलमल ढलमल भएको हाँगा जस्तो
आशा नभएको शाखा भईसके पछि
को नै पुन: जोड्न आउँछ!!
त्यसैले जे गर्नु छ हामी आफैले गर्नु छ। हामी आफैले पार लगाउनु छ हाम्रो आशाहरुलाई। बिशेष यो नयाँ वर्षले हामीलाई यस्ता एक र अनकौ निराशाहरु माथि विजय गरेर नयाँ आशाका दिनहरुको सुरुवात गरेको देख्‍न पाईयोस.... सबैलाई चेतना भया!!!!!
Labels: iकबिता, कहिलेकाँही
९०% नेपाली बल्गहरु spyware को खतरामा ?
हिजो अबेला सम्म डा. थापा संग निकै बेर कुरा गरियो। ब्यक्तीगत भेटधाटनै थियो। निकै बेर कुरा भईरहे पछि नेपाली बल्गको प्रसङ्ग उठ्यो। कुरा सुरु हुदै थियो, उहाँले एउटा कुरा उठाईहाल्नु भयो कि ९०% नेपाली बल्गहरु खोल्नै डर लाग्छ रे। खोल्यो भने “you have attempted to openadangerous website” भनेर आउछ र “यो पेज बन्द गर्ननै राम्रो” भनेर सल्लाह दिन्छ। मैले त पहिला ठट्टा नै होला भने तर जव उहाँकै कम्प्युटरमा खोलेर हेरियो तब मेरो बल्ग खोल्ने बित्तिकै “Trend Micro PC- cillin Internet Security” ले यस्तो जानकारी दियो।
त्यस पछि मैले धेरै जसो नेपाली मित्रहरुको बल्गहरु हेरे र प्राय जसो सबैमा यस्तै समस्या देखे। हामीले बल्गमा आउने आगन्तुको लागि राखिने WWW. Feedjit.com का recent visitors र live traffic feed जस्ता widgets को ठेगना देखाउदै यस्तो जानकारी दियो। त्यस पछि मैले मेरो बल्गवाट यो हटाएरै पनि हेरेँ। त्यस पछि यस्तो संकेत देखा परेन। मलाई यस सम्बन्धि मूल प्राबिधिक कुरा छीचोल्न गाह्रो हुने भएकाले मलाई बीचमा फुत्त आउन मन लाग्यो र मैले यो जानकारी राखे। जानकारीकै लागि मैले मेरो र केही साथिहरुको स्क्रीनसट पनि राखेको छु। spyware सम्बन्धी जानकारी राख्न हुने मित्रहरुले यथाचित छलफल गरिदिनु होला।
यस्तो wedgets प्रयोग नगर्नु भएका दौतरी, आकारजी , दिपेन्द्रजी र कृष्णजीहरुकोमा भने यस्तो देखा परेन। खतरा होस वा नहोस तर पेज खोल्ने बित्तिकै यस्तो आउन थाले पछि कसैले पनि किन पेज खोलोस र यो खतरा किन मोलोस?
कृपया!! उदाहरणको रुपमा तलका फोटोहरु हेर्नुहोला र यस सम्बन्धी आफ्नो बिचार राखिदिनु होला ।
“आफ्नो स्क्रिनसट नराखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेमा कृपया जानकारी दिनुहोला म यसलाई निकाल्ने छु”
Posted by दूर्जेय चेतना at 7:10 PM
यसरी आरम्भ हुदो रहेछ जीवन !!२!!
यसरी आरम्भ हुदो रहेछ समय !!१!! ……नितान्तै मोहित हुदै थिए समयको सुरुवात भईरहेको देखेर। सुनसान समय थियो, तर पनि समयले एउटा तरङ्ग निम्ताउदै थियो सदा झै सायद। मैले आफ्ना आखाँहरुलाई रोक्न सकिन र हेरिरहे। मलाई यो आनन्दको अनुभूती पहिले कहिलै भएन। हुन सक्छ मैले यस अगाडि समयलाई चिनेको थिईन। समयको यो रसलाई मैले कहिल्यै पनि ग्रहण गर्न सकेको थिईन। सायद यसै भएर होला, मैले आज यो समयको आफ्नो पन र यसले दिनसक्ने सुखको बयानै गर्न सक्दिन। पर क्षितिजमा सुनौला रेखाहरु देखिन थालेका थिए, म हातमा चियाको कप बोकेर घरबाट बाहिर निस्किए। घर सगै जोडिएको सानो ढिस्को र शीतका नजानिदा थोपाहरुको मलिनो चिसोपनको महसुस भईरहेको थियो। समयले आफ्नो नियमिता दर्शाउदै थियो जसलाई मैले रोकेर पनि रोक्न सक्दिन थिए। चलयमान समयसगै चल्नु पर्ने म र मेरा सबै। मलाई आखाँ बन्दनै गर्न मन लागेन, हेरिरहे मात्र हेरिरहे।
यो समयको साक्षी हामी दुई जना थियौ। यो समयको सुरुवातको दर्शन मैले पहिलेनै गरे मेरै परिभाषामा तर हुन सक्छ म भन्दा पनि पहिले उसले सुरुवात गरेको होस। मैले ख्याल गरिन तर पनि यो पछिल्लो समयको दर्शनको शुरूवात म पछि पक्कै उसैले गरेको हुनु पर्छ। मैले भन्नै पर्छ; जब म चियाको कपलाई ढुङ्‍गाको आडमा भुईमा राखेर यीनै आदमारा बस्ती, पहाड र यसको क्षितिजमा चड्दै गएको तर कुनै कलाकारले रंग पोत्न सुरु गरेको क्यानभासको भान पर्ने सुनौला रेखाहरुमा नजर पुराईरहेको थिए। यसै बीच ऊ मेरो अगाडि आएको थियो। मैले जसरी जुन तवरले नजरलाई नघुमाईकन हेरिरहेको थिए, मेरो त्यो समयको सहयात्री पनि त्यसरीनै आखाँनै बन्द नगरिकन हेरिरहेको थियो सायद। म अलिक पर थिए तर उसको स्थिरताले मलाई त्यही भान परिरहेको थियो।
हामीले यो समयको सुन्दरताको अनुभव गर्यौ एक अर्काको साक्षी भएर। त्यो ठाँउको लागि म त केही दिनको पाहुना थिए। म भोलि जान सक्छु तर ‍ऊ त्यहीको रैथाने हुनु पर्छ तथापि त्यो दिन म भन्दा केही समय पछि आयो र केही समय चाडैनै गयो। हुन सक्छ धेरै दिनबाट सबै भन्दा बढी म आफै भोकाएको थिए। म नै पहिले आएँ र अबेर सम्म म नै बसेँ त्यँहा। यो कुनै नौलो कुरा हैन कारण म त आफ्नै बीच र आफ्न्तहरुकै बीच पराई भईरहेको थिए; जसलाई मैले आफ्नो भाग्य भनेर पनि भ्रम पालेको छु। मेरो हो तर पनि मैले कसैको रीस गरे जस्तो र फेरि कहिल्यै देख्न नपाईने पो हो कि भने जस्तो गरेर हेरिरहेको थिए।
मलाई उसले देख्यो वा देखेन, ख्याल गर्यो वा गरेन; त्यो भन्दा हामी त्यस दिनका लागि एक दैनिकी सुरुवात गर्दै थियौ; एक साथ एक अर्काको साक्ष्य भएर। ऊ हतार भए जस्तो अलिक चाडै फर्कियो। मलाई लाग्यो नन्दन समयको त्यो सुरुवातको नमनको लागि नै आएको होला ऊ यहाँ। सहज दैनिकीको रुपमा लियो सायद उसले तर मेरो लागि यो उत्सव थियो र सुन्दर मौका। त्यसैले म भुईमा बसेर यो सबै दृष्यको अनुभव गरिरहेँ।
(म भन्दा पछि नै आईपुग्यो ऊ ) ( म भन्दा अगाडिनै गयो ऊ)
समयको यो चालसगै मैले पनि चल्नु थियो, दैनिकीनै भन्छौ सायद हामी तर जब म फर्किनको लागि भुईबाट चियाको कप उचाल्दै थिए तब मेरो मनमा आईरहेको थियो, समयको ब्यापार गर्ने म र मेरो परिवेश, नास्तिक नभए पनि नास्तिकतामा बाचेको बुदुनो, भौतिकता र भौतिक सुबिधामा जीवन खोज्ने म; मलाई के थाह.... हरेक दिन यसरी आरम्भ हुदो रहेछ नन्दन समय र जीवन तर म त फगत.......... सबैलाई चेतना भया।।
Posted by दूर्जेय चेतना at 9:44 PM
घर भित्र दुम लुकाउने नेताहरु र कोपनहेगन
सिरक भित्र मुठ्ठी कस्नेहरु कहिलै पनि बाहिर मुठ्ठी कस्न सक्दैन्। जीवन अनकौ मोडमा सहज रुपमा उपस्थित हुन जान्ने जीवन बाँचेको मान्नु पर्छ। पर्दा पछाडिको सुख जीवनले कसैलाई प्रेरणा दिन सक्दैन। आफैमा रमाउने स्वार्थी तरिका भन्दा अरु केही हुदैन त्यो। त्यसैले जीवन आफू बाच्नको लागि भन्दा पनि अरुलाइ बचाउनका लागि प्रयोग भयो भने मात्र जीवन बाचेको अर्थ हुने छ। कुनै मिथ्या दर्शनको भरमा सहज र उपमा वाच्नेहरुको लागि जीवन जान्ने र बाच्ने भन्दा केही हैन। न त कसैले यो जीवनको मया गर्छ र न त सार्थक जीवननै हुने छ। कसैका लागि बाँच र अनि मात्र आफू बाचेका हुन्छौ।
संसारको अनेकौ युग पुरुषहरु कहिलै आफू बाचेनन्। बाच्नको लागि कहिलै संघर्ष पनि गरेनन् तर पनि हामीमा त्यो बोध कहिलै भएन। डार्बिनको सिद्धान्त नै सही बाच्नको लागि कुनै कृष्ण वा कुनै क्राईष्टनै चाहिने हैन न त कुनै अल्लाह। बाच्नु तिम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो र तिमी कसैलाई नमाने पनि, कुनै माथि आस्था नराखे पनि र कसैलाई आफ्नो जन्मको श्रेय नदिए पनि बाँचेका हुन्छौ र बाच्ने नै छौ। तिमी सास फेरि रहन्छौ, मिथ्या ईन्द्रियहरुको प्रयोग गरेकै हुन्छौ र बाचेको नाटक गर्दै छौ। यहाँ माटो र ढुंगाहरु पनि बाचेकै छन्। कसै न कसै, कसै गरि उनिहरुको जन्म भएकै हो र अन्त्य पनि अनकौ रुपमा हुने नै छ । जन्मनुलाई बाच्नुको अर्थमा बुझ्नेहरु यँहा तिमी सजीव मात्र हैन, निर्जीवहरु पनि छन्। फगत सजीव भएर निर्जीव झै बाच्ने तिमी मात्र हुन सक्छ, भन्न सकिन्न तर पनि निर्जीव जीवन त पक्कै बाचैकै हौ।
के को लागि र कसका लागि बाच्ने तयारी हुदैछ जीवन। किन मरेको नाटक गर्छौ तिमी अन्त्यमा। जीवन बाच्ने नाटक र बाँचेको नाटक अनि मरे पछि मरेको नाटक गर्ने तिमिलाई कुन उपमाले सम्बोधन गर्नु पर्छ थाह छैन तर पनि त्यो अद्‍भुत नाटक भने हो। किनकि तिम्रो जन्मनै मृत्य तुल्य छ। तिमी मृत्यु तुल्य जीवनको दर्शन बोकेर हिडेका छौ । न त तिमी कहिलै जन्मियौ न त तिमी कहिलै मर्ने नै छौ। तिम्रो बिकास र तिम्रो हरेक चाल यही निर्जिवताबाट साँधिएर, संगालिएर र पोषित भएर चलाएमान भएको हो भन्ने कुरा किन बिर्सिन्छौ? के लिएर आएका छौ तिमी र के लिएर जान्छौ। न ल्याउन सक्छौ न त लिएर जान सक्छौ तै पनि किन मेरो भन्छौ र मेरो लागि र म लागि अरुलाई मार्छौ? यदि तिमीले बाच्नु नै बाच्न हो भने तिमीले किन अरुलाई बाच्न दिदैनो। हजारौ भुर्णहरुको जीवनलाई किन स्वीकार गर्दैनौ? किन उनीहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दौनौ? हैन भने तिमीले स्वीकार गर्नु पर्छ मैले भबिष्यमा जन्मने जीवनको हत्या गर्दै छु। मेरो र म जस्ताको मात्र हैन अन्य र अनेकौ सम्भावनाहरुको घाँटी काटेका छौ तिमीले। हैन भने बन्द गर यो सबै। केही नगरे पनि राम्रो संग बाचँ र भबिश्षको लागि पनि केही तर स्बस्थ समाज छोडेर जाउ।
आफैमा भुल्ने तिमी किन अरुलाई भुलाउन खोज्दै छौ। भबिश्यको कुनै प्रतिनिधि छैन सायद त्यसैले तिमिहरुले उसको अस्त्बलाई स्वीकार गरेका छैनौ। भविश्य तिम्रो हो भन्ने कुरा तिम्रो सन्तान र पुस्ताहरुलाई सम्झ नभए कल्पना गर। तिमीले यो समस्या बोकेका छौ भने तिम्रो भबिष्यले के पाउला। भबिष्यमा तिमी वाच्न चाहन्नौ सायद। किन कि भौतिक उपस्थिती भन्दा बाहेकको तिमिले जीवनलाई स्वीकार गरेका छैनौ। त्यो तिम्रो भूल हो। तिमिले आफ्ना सन्तान र भविष्यमा आफ्नो जीवन खोज्नु पर्छ र त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्छ। त्यसैले म सोध्छु तिमिलाई कोपनहेगन के हो ?
तिमीले भित्र केही हेर्नु पर्दैन। सभा र नाटक गरेर मात्र देश समाज बन्ने राम्रो हुनै हैन। आफ्नो देशमा टेबल ठोकेर मात्र र जनताको अगाडि केही गरेको नाटक गरेर मात्र हुदैन। तिमी भित्र र तिम्रो भुमीमा बाह्रय बलत्कार भएकै हो र भई रहेको छ। देशको हरेक सीमा र क्षेत्रमा मानव सभ्यताको कालदोष भईरहेको छ। घर भित्र दुम लुकाउनेहरुको फुर्ती घर वाहिर बढीनै हुन्छ। घर भित्र श्रीमातीको लात्ती सहनेहरु घर बाहिर अलि बढी टेवल ठोकेर कुरा गर्छन। तर यहाँ कुरा फरक छ। फरक छ त, आत्म सम्मान र उनै लात्ती हान्ने श्रीमतीको अगाडि घर वाहिर देखाउनु पर्ने पुरुषार्थ। सबाल श्रीमतीको हैन; हो त परिवेष र नियतको। तिम्रो व्यवहारले त्यही भन्छ, तिम्रो घर, समाजको हालतले यही भन्छ र लात्ती हान्नेहरु र सगै नहान्न भन्नेहरु लात्तीको बिरोधमा बकालत गर्छन। यो त मात्र परिवेश हो र नाटक। त्यसैले आफ्नो घर बनाउ पहिला अनि तिम्रो समाज बन्छ र तिमीसंग अरुले गर्ने ब्यवाहार राम्रो हुन्छ। तिमीले बाहिर गुहार मागेर हुदैन। बाटोको प्रदुषण र धुलो र यहाँ भईरहेको अब्यबस्था माथी नजर गर, मिलाउ र मात्र जाऊ बाहिर। घर मिलाउ बाहिर आफै मिल्छ। हैन भने जीवन र मृत्युको खेल तिमी पनि खेलिरहेका छौ। तिम्रो पेशालाई तिमी नोकरी नठान त्यो संग सबै जीबनको अस्तित्व गासिएको छ। अन्यथा के त ? मित्था बोध वा मात्र बोध??? …….सबैलाई चेतना भया।
Posted by दूर्जेय चेतना at 7:10 AM
तिमीले कसम खाने, जनताले दु:ख पाउने?
ठूली माइली र सानी कान्छीको बीचमा झगडा चलिरहेको थियो कचौरा हराएको बिषयमा। हिजो पधेरामा डोको भरी जुठा भाडा बोकेर माज्नको लागि गएका थिए दुबै जना। ठूली माइलीको काँसको कचौरा हराएको रहेछ। सानी कान्छीले चोरेर लुकाईस भन्ने आरोपको प्रतिउत्तरमा भनाभन भईरहेको थियो।
“लौ तेरो छोरा छोरीको टाउकोमा हात राखेर भन त तैले कचौरा लगेको छैन भेनेर” माइलीले कसम खुवाउन लागि। “मैले यसबेला पनि भन्न नपाऊ, यी यो छोराको कसम खाएर भन्न सक्छु कि मेले तेरो कचौरा लगेको छैन।“ कान्छीले सफाई दिई।
यदी कान्छीले कचौरा चोरेकै भए के हुन्थ्यो? उसले कसम खाईसके कि छ। यदि उसले चोरेको खष्डमा उ आफै र आफ्नो सानो छोरालाई जे पनि हुन सक्ने भयो। एकातिर यदि उसले चोरेको भए यसबेला पनि भन्न नपाउँ भनेकै छ अर्थात मरिहालु भनेकि छ भने अर्को तिर आफूसंग आफ्नो छोरा पनि मरिहालोस भनेर भन्न पनि भ्याईसकेकी छ।
ईश्ब रको नाममा कसम खाए, ईश्बरले मेरो नष्ट गरुन भन्ने अर्थ त लाग्छ नि, हैन र? त्यस्तै यदि कसैले आमाकै कसम खाएमा के होला? पक्कै पनि आमाले नष्ट त गर्ने हैन होला। नष्ट गर्ने नसक्ने आमाको कसम खानुको मतलब के होला तभन्दा, यदि उस्ले झुट्टा बोलेको छ वा ढाटेको छ भने, उसको आमा मरिहालोस बा उनलाई अनिष्ट होस नै
भन्ने हैन र?गल्ति गर्ने आफू दु;खको कामना गर्नु अर्काको। कत्तिको न्याय संगत कुरा हो यो? यो सबै कुराहरुको जड र कसम ख्वाएर सत्य बकाउने चलन हाम्रोमा ब्यापक छ। बिषेशरुपमा अशिक्षाको कारण ईश्बर र अदृष्य शक्तिमाथि विश्वास गर्नेहरु। तर यहाँ डर त पढे लेखेका, जान्नेहरु र नेताहरुको कसमको हो। कसम खानुलाई के रुपमा बुझ्ने र कसरी यो परिपाटीलाई बुझ्ने? ईश्बरको नामको कसम होस वा जनताको नाममा वा आमाको नाममा होस कि छोरा छोरीको नाममा; कसम खाने भनेको चाहिँ यदि उसले झुट बोलेको रहेछ वा झुटको सहारा लिएको रहेछ भने, तद्अनुरुप उ माथि ईश्बरले कारबाही गरुन वा आमा वा छोरा छोरी मरेर उसलाई सजाय होस वा नेताले जनताको नाममा खाएका रहेछन् भने अर्को पल्ट (वा फेरि एक पल्ट) चुनावमा हराइदिउन् भन्ने अर्थ भन्दा अरु केहिलाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
नेपाली भाषा बोल्दा साह्रै राम्रो सुनिनेमान्छेहरुको जमघट भएको ठाउँ, जसको भाषा र उच्चारण अरुका लागि रिफ्रेष्स हुने ठाउँ, तर्क त प्रमाणले झुटो बोल्ने मानिसलाई झुट्टा साबित गर्ने ठाउँ, समाचार तथा समसामयिक बिषयको व्याख्या, समालोचना बा टिप्पणीको लागि निकै मानिदै आएको ठाउँमा पनि यसको प्रयोग यसरी राम्रै संग भईरहेको छ। सुन्नुस है त रबिन्द्र मिश्रको: आमाको कसम।
मूल कुरा: समस्याको समाधान कसम लिने र खाने हो त? हैन!! मात्र एक झुटको लागि अर्को झुटको सहारा लिनु वाहेक केही हैन कसम खानु र लिनु। मन सफा हुनु पर्यो, ईमान्दार हुनु पर्‍यो। कसम खाएरै हुने भए देशमा धेरै ठूला गन्यमान्यहरुले हरेक पटक कसम खाएकै हुन र कसम खुबाएकै हुन्। कहिले ईश्बरको नाममा त कहिले जनताको नाममा। ईश्बर, जनता, आमा, छोरा छोरी बा कुनै पनि कुराको कसम यदि साछीको लागि मात्र हो भने बोल्दै नबोल्ने वा सजाय दिनै नसक्नेको कसम के का लागि। यदि कसम प्रतिबद्धता हो भने किन आमाको कसम , किन ईश्बरको कसम वा किन जनताको कसम? आफै ईमान्दार रुपमा प्रतिबद्ध भए कस्ले रोकेको छ? जनताले सजाय दिईसकेकाहरुले जनताको कसम खानुको मतलब के होला? ईश्बरले सजाय दिईसकेकाहरुले ईश्बरको नाममा कसम खानुको अर्थ के हुन्छ? सिधै कुरा छ, जनताले नष्ट गरुन हैन बरु, मैले काम गर्न सकिन, मैले ईमान्दारीका साथ काम गरिन भने जनतानै नष्ट हुन्। यही कामना हैन? राम्रो होस सबैको कसमले। कहिलै काम गरेको छैन फेरि पनि काम नगरोस कसमले र मैले लेखे जस्तो जनताको नष्ट हुने काम नहोस। कसैले गरेको कुर्कमको फल जनताले भोग्न नपरोस ..हा हा.. सबैलाई चेतना भया।।।।।
Posted by दूर्जेय चेतना at 1:46 AM
Labels: गफै त हो
यसरी आरम्भ हुदो रहेछ समय !!१!!
बिहानको चार वा साढे चार बज्दै थियो, निन्द्रा राम्रो संग लागेन। अनेकौ कुराहरु मनमा एकनासले आईरहेको थियो सायद तन्द्रामा थिए म, त्यसै आखाँ खुल्यो। सपना पनि त्यस्तो केही थिएन बिउँझाईदिने र बिपनामा पनि कोही थिएन बिउँझाईदिने, तर पनि बिउँझिँए। जाडो त्यति बढेको पनि हैन तर सिरक चाहिँ ओड्नु पर्ने भईसकेको थियो।
लामो समय पछि नेपाल गएकोले पनि होला, वास्तवमा घर आएको दिन देखि निन्द्रा परिराखेको थिएन। बिस्तरा नै परिवर्तन भएर चाहिँ नभनु होला। समय थोरै थियो। जीवनको लगभग पच्चीस वसन्त पार गरिसकेको ठाउँ भएर पनि किन हो किन एकदमै नौलो लागि रहेको थियो। साह्रै मन आत्तिएको रहेछ बाहिर बस्दा बस्दै। त्यसै बीचमा समय थोरै थियो र अनेकौ कामहरु पनि सक्नु थियो। काम भनिहाल्नु भन्दा पनि भेटघाटनै बाँकी थियो। समयलाई जसरी सकिन्छ त्यसरीनै बिभाजन गर्दै थिए।
बिहानको खान खाए पछि जानु थियो कतै र सायद निन्द्रा लागिरहेको थिएन। टेलिभिजन पनि खोलेर हेरेँ तर खासै केही लागेन। कम्प्युटरको ब्याट्री सकिएकोले खोल्ने कुरै भएन। बेलुका हेर्दै थिए ब्याट्री पनि सकिने र लोडसेडिङ पनि। हुन त कुनै निर्धारित समय हैन रे तैपनि गईरहेन बिजुलीले धोका दियो। पर कतै कुखुरा बासेको पनि सुनियो। म लागे त्यही घरको छत तिर। पूर्व फर्किएको घर। सूर्यको पहिलो दर्शन गर्न पाईने ठाउँ, सधै जिज्ञासा भइरहने रहेछ कि आज बादल छ कि छैन, पानी परिरह्यो भने देख्न्न नपाईने हो कि यस्तै यस्तै। कोठाबाट कुर्सी बोकेर छतमा लागेँ। पूर्व तिर फर्किएर सुनसान पहाडहरुलाई हेरिरहेँ। कस्तो सुन्दर सुनसान र शान्त पहाड अनि पहाडले चुमिरहेका धमिलो, निलो र सुनौलो आकाश। निकै बेर टोलाएर बसे र हेरिरहेँ।
भोलि जानु छ कतै र केही समय पछि फेरि बिदेश फर्कनु छ। मनमा कता कता पीडा थियो। यसै बिच मेरो मनमा लाग्यो किन नहोसकी यो सुनसान पहाड र यसै बीच मैले लिईरहेको आन्नद कैद गरुँ क्यामरामा। सानो आठ मेघा- पिक्सलको क्यामरा थियो साथमा। मैले जोड लागाएर वा भनु अनेकौ पोजमा यो ठाउँको फोटोहरु लिएँ। कहिले नजिकबाट त कहिले टाडा बनाएर। केही राम्रा पनि आएका छन् त केही धमिला। रातीको समय, कमसल क्यामरा र अव्यवसायिक कार्य क्षमताको बीचमा केही प्रयास गरे आफै भित्र रमाउन।
बिदेश रहदा बिहानै काममा जान हतार; फेरि सबै सहरहरु समतल भूभागमा बसेकोले पनि पहाड हेर्न र पहाडबाट लुकामारी खेल्दै आउने र जाने सूर्य, तारा र जुनहरुको दर्शन गर्न पनि हजारौ रुपैया खर्च गर्न पर्ने भएर पनि होला यस्तो दर्शन गरिएन भन्दा पनि हुन्छ। हेर्नै गईहालियो भने पनि कता कता आफ्नो नलाग्ने। पहाडहरुले नै ब्यापार गरे जस्तो, पराई ठानेर जिस्काए जस्तो, समयको बन्धन, पैसाको बन्धन। यस्तै यस्तै कारणले कहिलै पनि मन शान्त हुन र रमाउन सकेन। तर मेरो देशको यो पहाड र यो आकाशले म संग कुनै कुरा मागेको छैन। जति हेर्नु छ हेर, जति मन शान्त पर्नु छ पार भने जस्तो लागि रहने। किनकि यो मेरो हो। बिलकुल मेरो। कसैको रोक छैन यसलाई मैले मेरो भन्न।
आफ्नो मानेर पनि होला निकै बेर बसे। सूर्य नउदाउन्जेलसम्म बसिरहे र भित्र भित्रै अनुभव गरे..... हरेक दिन यसरी आरम्भ हुदो रहेछ समय!!!....... सबेलाई चेतना भया।।।।।।।।।।।।।।
Posted by दूर्जेय चेतना at 8:58 PM
राज्य पुनर्संरचना: सम्भावित बहसको बिषय
राज्य पुनर्संरचना आज एउटा ठूलो सवाल भएको छ। हामी राज्यको सीमा र रेखाङ्कन वरिपरि नै अलमलको स्थितिमा छौ। देशका सिमानाहरू विभिन्न राज्यमा बाँड्दै मा राज्यको हरेक प्रान्त वा भनुँ क्षेत्रले विकास गर्ने हैन। हामी आज सभ्यताको त्यो कालखण्डमा आएका छौं, जहाँ समाजले अनेकौँ फड्को मारिसक्नु पर्ने थियो। संसारका बिकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा हामी अहिलेको पुनर् संरचनाको ढाँचाले कहिले सम्ममा त्यी बिकसित राष्ट्रको दाँजोमा पुग्न सक्ने छौ ? यो प्रश्नको कतै कहिलै पनि बहस भएको छैन। जनताको आधारभूत कुराहरू माथिको पहुँच कहिले सम्म र उनीहरूको जीवनस्तर कुन दिनमा आई पुग्दा सहज र सोचे जस्तो हुने छ ? यो कुराको कतै कसै सँग जबाफ छैन। यो निन्तान्तै दु: ख लाग्दो कुरा हो। दु: ख लाग्दो कुरा यस अर्थमा पनि हो की हामीसँग राज्यको विकास र यससँग उत्पन्न विषयहरूमा यथेष्ट संवादको सम्भावना नै गौण बनेको छ। हामीसँग भएका र चलिरहेका नेतृत्व वर्गले यो विषयमा बहसको त कुरै छाडौं सोच्न पनि भ्याएका छैनन्। देशको मूल मुद्दा बाहेकको अनेकौँ अन्य गौण सवालहरूमा समय खेर फालेको अवस्थामा एउटा सशक्त सोच र दिशानिर्देशको खाँचो महसुस भइरहेको छ।
मैले आज कुरा गर्ने खोजिरहेको विषय संसारका बिकसित र सम्पन्न देशको लागि नौलो हैन तर हाम्रो परिवेशमा भने नौलो होला र आवश्यक पनि। सर्वप्रथम हाम्रो देशको दुर्गम जिल्ला वा कुनै गाउँको कुरा गरौं र यो परिवेशको पृष्ठभूमिमा केही कुराको मनन गरौं। हाम्रा कति प्रतिशत भूभाग अति दुर्गम स्थानको रूपमा छन् त? कति जनसङ्ख्या त्यी स्थानमा नारकीय जीवन बिताइरहेका छन्? यसको पहिला पहिचान गरौं। न बाटो छ, न बिजुली, न स्कूल छ, न अस्पताल, न राज्यको पहुँच। भात खानैको लागि बर्ष दिन कुर्नु पर्ने अवस्थामा चाहेको बेलामा किनेर खान सकिने बजार छैन। उत्पादित बस्तुहरूको बेच्ने बजार छैन। लगाउने कपडा छैन। तातो गरि बस्ने कुनै आधार छैन। अझै त्यो भन्दा पनि पहिलो र मूल कुरा त राज्यको पहुँच छैन, सुरक्षा छैन। कुनै अपराध भयो भने राज्यको प्रहरी पुग्न कहयौ दिन लाग्ने ठाउँहरू छन्। राज्यको पहुँच नहुने ठाउँमा गाउँ वा बस्ती राख्न ठीक हुन्छ वा हुँदैन? राम्रो सगँ सोचौ त। जीवनजल जस्तो साधारण औषधीको पहुँच छैन। चेतनाको कुरा गर्ने हो भने त कहाली लाग्ने अवस्था छ। नुहाउँदा साबुनको प्रयोग गर्नु पर्छ भनिरहँदा, रिठ्ठा भन्दा अरूले नुहाउन हुन्छ र? भन्नेहरूको संख्या गन्न नसकिने अवस्थामा छ। राम्रोसँग सोचौं त; के यो मानव सभ्यताले सयौं दशक अगाडि जितिसकेको कुरा हो कि हैन? हामी अझै सहरी ठूला कुरा गरिरहेका छौ। मोटर बाटोको त कुरै नगरे हुन्छ, गोरेटो बाटोको कुरा गर्ने हो भने पनि, एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जानको लागि भिरालो रखवारीको वा पहराको बाटो, भित्तामा भइरहेको ढुंगाहरुलाई समातेर जाने कहयौ ठाउँ र गाउँहरू छन्।
ल मानौँ देशमा शान्ति भयो र देश विकासको क्रममा अगाडि बढ्यो भने पनि कति वर्षमा त्यी सबै कुराको पहुँच पुग्ला त्यी गाउँ सम्म? फेरी विकासको बढ्ने क्रम हेर्ने हो भने, सहरी क्षेत्र जब सम्म पुर्ण हुँदैन तब सम्म विकासले सहरको बाहिर सिमाना पनि छुँदैन। काठमान्डौ बीचमा भएको विकासको पहुँच त्यही काठमान्डौ बाहिर क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन। तपाई हामीले काठमान्डौबाट सुरु गरेको विकासको क्रम, रोल्पा रुकुम सम्म कहिले पुग्ला? कहिले रोल्पा वा रुकुमका जनताले आधारभूत अधिकार पाउलान्? यो सबै कुरा सम्झने वा कल्पना गर्न पनि नसकिने अवस्थामा रहेको छ।
फेरि सबै ठीक अवस्थामा रहेको समय र परिवेशमा पनि यदि राज्यले विकासको क्रमलाई काठमान्डौबाट नगरीकन यीनै ठाउँ वा गाउँबाट सुरु गर्यो भने पनि के यसो गर्न सक्ला? लागतको हिसाबले काठमान्डौ र कुनै तराइको समतल भू-भागको तुलनामा हजारौं गुना बढी लाग्ने छ र हजारौं गुना महँगो हुने छ त्यो ठाउँको विकास। तराईको भू-भागमा ५० किलोमिटर राजमार्ग वा पक्की बाटो बनाईरहदा यी ठाउँहरूमा १ किलोमिटर बाटो खन्न गाह्रो हुने भौगोलिक परिवेश छ। यो सत्य हो कि हैन? अब सोचौं देशले गर्न चाहयो भने के लागत र बजेटको हिसाबले यो सबै गर्न सम्भव छ? के देशले यस्ता सयौं क्षेत्र वा गाउँमा यो लगानी गर्न सक्छ? पैसानै भए पनि यो ठाउँमा विकास गर्न र चाहिने आधारभूत कुराहरू पुर्‍याउन समेत कति समय लाग्ने हो, कसैसँग यसको लेखाजोखा छैन।
हामी यो यथार्थताको परिवेशमा रहेर आज राज्यको पुर्न संरचनाको कुरा गरिरहेका छौं र अझ आज हामीले राज्यको यो कल्पना देशको विकास र भू-राजनैतिक जटिलतालाई मनन नगरीकन, मात्र राजनैतिक चलखेलको सहग बाटो खोजेको हो कि हैन? देशमा कसैबाट राज्यको माग भईरहदा तराई मात्र किन चाहिन्छ र त्यसै हुनु पर्छ भनिएको छ। किन तराईलाई छुट्टै राज्यको माग गर्नेहरु उनीहरूले कल्पना गरिरहेको राज्यमा पहाडी वा हिमाली भू-भागको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेका छैनन् ? के देश उनीहरूको हैन? नेपाली भईसके पछि तराईका अधिकांश भू-भाग जस्तै पहाडी वा हिमाली भेकको विकासको जिम्मा उनीहरूको हो कि हैन? किन सहज भू-भागको माग भइरहेको छ त? यो त उदाहरण मात्र हो कि हामी कथित राजनैतिक खेलको दाउपेच भन्दा कहिलै पनि माथि उठ्न सकेनौ।
समस्या जताततै छ तर यसको यथार्थ समाधानमा पहल नहुनु दु: ख लाग्ने कुरा हो; तर अब ठोस रूपमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ।
पुनर्सरचना भूगोलमा हैन बाच्ने जीवन शैलीमा हुनु पर्छ
व्यवस्थित सहरीकरण र सुविधाको हिसाबले तराई वा समतल भू-भाग सजिलो हुने गदर्छ। लागत र लगानीको हिसाबले समतल भू-भागहरुको व्यवस्था सहज हुने गर्छ। त्यसैले अब रुकुम र रोल्पा जस्ता हजारौं अनकन्टार गाउँमा रहेका लाखौँ मानिसलाई बाटो खनिदिने, स्कूल बनाइदिने, अस्पताल र डाक्टरको व्यवस्था गरि दिने जस्ता कहिलै समाधान नहुने कुरामा झुट्टा आश्वासन दिनु भन्दा त्यस क्षेत्रमा लाग्ने लगानीलाई उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गरेर, सहज विकास गर्न सम्भव स्थानहरूमा पुनर्स्थापित गराउनु वा बसाइ सार्नु पर्छ र यसरी खाली भएका ठाउँलाई राज्यले अन्य प्रयोजनको लागि, जस्तै विदेशी वा आन्तरिक पर्यटकको लागि व्यवस्थित र सुरक्षित गन्तव्य स्थानको बाटो खोल्नु पर्छ वा राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीमा सजिलो र सम्भावित आम्दानीको बाटोहरू खोजिनु पर्छ । चाहे वनको विकास होस चाहे जडीबुटीको खेती होस; यी स्थानहरूमा राज्यले कम लगानीमा उच्च आमदानीको बाटो खोज्नु पर्छ । उता पुनर्स्थापित स्थानहरूमा वैज्ञानिक खेती र औधोगिकरण मा जोड दिएर जनताको जीवन स्तरलाई उकास्ने काममा लगानी गर्नु पर्छ। हामी थोरै छौ, नेपाली जन संख्या धान्न नसकिने अवस्थामा छैन, देशलाई औधोगिकरणमा लैजाने हो र विकासको अनेकौँ सम्भावनालाई खोल्ने हो भने, हाम्रो जनशक्तिले हामीलाई नै पुग्दैन। हामीले काम गरेर नसकिने अवस्थामा हुने छन् हाम्रै देशमा रोजगारी वा भनौं कामहरु। यो यथार्थता तत्कालले कसैले लागू नगर्ला वा यस विषयमा कसैले नसोच्ला तर समाधानको बाटोको लागि मलाई लाग्छ यो बहसको विषय पक्कै हुनेछ कुनै एक दिन। पुनर्सरचना भूगोलमा हैन बाच्ने जीवन शैलीमा हुनु पर्छ.......सबैलाई चेतना भया............
Posted by दूर्जेय चेतना at 10:37 AM
Labels: कहिलेकाँही, लेख/रचना
तपाईको नजरमा दूर्जेय चेतना!!
सर्बप्रथम त विजया दशमी तथा दीपावलीको शुखद उपलक्षयमा मेरा सबै मित्र, शुभचिन्तक तथा पाठक गण प्रति मेरो हार्दिक मंगलमय शुभकामना। यो सुखद चाड कसैको पेवा नभई, सुरु देखि जसरी सबै समुदाय, धर्म र वर्गको बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने चाडको रुपमा मनाउदै आईएको छ त्यसरी नै मनाउन पाईयोस।
मेरा पाठक वर्गमा मैले आज नौलो जिज्ञासा लिएर आएको छु। मेरो यो लगभग ६ महिनाको ब्लग यात्रामा मलाई धेरै अनुभबहरु गर्ने मौका मिल्यो। धेरै कुराहरु जान्ने र धेरै असल मित्रहरु संग सङ्गत गर्ने मौका मिल्यो।
आज मैले तपाईहरुसंग मेरो ब्लगको राम्रो र नराम्रो पाटोलाई खुला मनले राखिदिनु हुन अनुरोध गरेको छु।
भाषाको शुद्धता एकदमै ठूलो कुरा हो तर ब्लगको सुरुको समयमा अनलाइन युनिकोडबाट यहाँहरु बीच आईरहदा भाषामा लाज लाग्ने गरिनै गल्तिहरु भएका छन्। जो मैले फेरि फुर्सदको समयमा पुन लेख्ने छु वा सचाउने नै छु। मेरो भाषाको शुद्धतामा धेरै प्रश्नहरु उठ्ने कुरालाई यसबेला सोचेको छु। यसको अलावा मेरो राम्रो नराम्रो पक्षको बारेमा कृपया मन खुलाएर कमेन्ट गरिदिनु होला।
यो दसैंको शुभ अबसरमा मेरा कमीकमजोरीलाई शुद्ध बनाउने प्रयासको रुपमा उपयोग गर्न मन लागेर यहाँहरुको बिचमा यो प्रस्ताव राखेको हुँ। तपाईहरुको सुझाव ले मलाई अझै राम्रो गर्ने हौसाउने छ। त्यसैले मलाई जान्न मनलाग्यो “ तपाईको नजरमा दूर्जेय चेतना”।।।
Posted by दूर्जेय चेतना at 11:57 AM
शाश्वत सत्य: पृथक पृथक सोचमा
चेतना भनेर हुने मात्र कुरा हैन सायद, यो त गरेर र प्रयोगबाट सिद्ध हुने कुराहो। सोच एउटा हुन सक्छ तर परिवेशले अर्कै रुप लिन सक्छ। साह्रै कठिन र टाढा हुन सक्छ गन्तव्य तर राम्रो र ब्यस्थित बाटोले सहज हुन सक्छ यात्रा। कुनै पनि घटनाक्रम वा वस्तुस्थितिको व्याख्या गर्ने तरिका फरक हुन सक्छ तर यथार्थता कहीँ जादैन। हामी कयौँ मामलामा थाहँ नपाई आफ्नो अनुकूल घटनाक्रमलाई व्याख्या वा परिभाषित गरेका हुन्छौ। चुरो कहीँ जादैन तर पनि हजार मानिसको हजारौ बुझाई हुने गर्छ। ब्यक्तिगत बुझाई र बिश्लेषणले कुनै पनि घटनाक्रम कयौँ पटक सीमित दायरा भित्र त कयौँ पटक विशाल दायरामा जान पुग्छ। हामीले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने ब्यबहार फरक छ र त हामी फरक मान्छेहरु हौ र फरक हुनका लागि पनि हामी हाम्रो दृष्टिकोणलाई, व्यवहारलाई पृथक पृथक रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौ। यो क्रममा हामी कयौँ पटक यथार्थताको धरातल नाघेँर वा मिचेर अगाडि बढ्छौ। थाह पाएर वा थाहनै नपाई कयौँ पटक गल्ती गर्छौ। नजानेका कुरामा आफ्नो मत राख्छौ र जानेका कुरामा कसैले जान्नेहोकि भन्ने पीरले मौन बस्छौ। मानिस मानिस बीचको यो पृथकता सगै यसको समष्टिगत रुपले समाजको पहिचान गर्ने गर्छ। यही जड ब्यबहारले सम्पूर्ण रुपमा समाज र राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व हुने गर्छ। असल सोच र असल व्यबहारको कुन हद सम्म प्रयोग गरिएको छ, र कुन हद सम्म यसलाई सामाजिक मान्यता प्रदान गरिएको छ, त्यसले निर्धारण गर्ने गर्छ समाज आफै र देश पनि। कयौँ मूर्ख मानिसहरुको बीचमा विद्वान, विद्वानै भएको कारण मूर्ख बनाइने गर्छ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो अनुकूल बनाईने क्रममा जस्तो सुकै बुझ्ने वा असल चरित्रको उदारहण पनि धमिलो हुदै जान्छ र अन्तयमा त्यही विलय हुन्छ।
फरक के हो त? सजिलो छ, हामीले असल पात्रलाई कहिलै पनि समेट्ने कोसिस गरेका छैनौ। हामीले कहिलै पनि असल जमातलाई एकै ठाउँमा राखेर फल्न र फूल्ने मौका दिएका छैनौ फगत काम्लोमा पोखिएको सातु जस्तो अबस्थाले गर्दा कहिलै पनि असल सोचको एकरुपमा बिकास हुन सकेको छैन।
एउटा प्रसङ्ग राख्न मन लाग्यो यहाँ नेर: आफ्नो ढाडमा लामो डोरीले बाँधेर धरहराको बीचमा रंग लगाउन तुर्लुङ्गै झुन्डिएको एउटा मजदूरको निकै चर्चा भइरहेको बेला, भोलिपल्ट पत्रिकामा उस्को फोटो छापिन्छ र फोटोको तल लेखिएको हुन्छ” पापी पेट”। यही क्रममा टोकियो टावरको बीचमा डोरीले बाँधेर झुन्डिएको मजदूरको हकमा यसरीनै फोटो आउछ पत्रिकामा तर तल लेखिएको हुन्छ: बहादुर जापानी छोरा”। कुरा सिधा छ। त्यो हो सोच र हेर्ने दृष्टिकोणको फरक। एउटै घटनाक्रमलाई ठाउँ अनुसार फरक मात्र हैन माथि भनिए अनुसार निश्चित र एकै परिवेशमा पनि पृथक पृथक सोच र हेराईले प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। तर प्रस्तुति जे भए पनि, जसरी व्याख्या र उपमा दिए पनि यथार्थता एउटै हुन्छ। जतिसुकै नमिठो लागे पनि सत्य एउटै हुन्छ। फरक छ त हेराई र बुझाईको। बहादुर छोरा भनोस वा मूर्ख, जो जुनसुकै टावरमा झुन्डियोस यो प्रसङ्गमा त्यो पापी पेटनै हो झुन्ड्याउने । फरक छ त सुन्दा र भन्दा कुन राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रको। यो नै सत्य हो र सत्य शाश्वतनै हुन्छ। मानब जीवनमा यथार्थ परिस्थितिको पहिचान र त्यस सत्यकुराको आत्मसाथनै सबैभन्दा ठूलो आबश्यकता भएको छ अहिले।..... सबै लाई चेतना भया…………..
Posted by दूर्जेय चेतना at 10:12 PM
सकरात्मक तर प्रगतिशील आत्मविश्वास
१ युद्धको मैदानबाट फर्किएको कुनै लडाकुलाई मैले सोधेँ, के युद्ध राम्रो हो ?
२ कसै माथी प्रहार गरेर कसैलाई मारेर फर्किएको मान्छेलाई मैले सोधेँ, के हत्या गर्नु राम्रो हो?
३ चोरेर फर्किएको चोरलाई मैले सोधेँ, के चोर्नु राम्रो हो?
४ कसैसंग झगडा गरेर फर्किएको मान्छेलाई मैले सोधेँ, के झगडा गर्नु राम्रो हो?
५ बिधार्थीलाई गृहकार्य नगरेको निहुँमा बेस्करी कुटेर फर्किएका शिक्षकलाई सोधेँ, के बिधार्थी कुट्नु राम्रो हो?
६ चीट चोरेर पास भएको बिधार्थीलाई सोधेँ, के चीट चोरेर पास हुनु राम्रो हो?
७ भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाएको कर्मचारीलाई सोधेँ, भ्रष्टाचार गर्नु राम्रो हो?
८ अपराधीलाई बेस्करी कुटेर बसेको पुलिसलाई सोधेँ, के अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिएर कुट्नु राम्रो हो?
९ राजनीतिको खराब खेलमा खप्पिस भएका नेतालाई सोधेँ, के राजनीति खराब खेल हो?
१० धर्म, भाषा र वर्णको लागि आन्दोलन गरेकाहरुलाई सोधेँ , के धर्म, भाषा र वर्णको आधारमा विभाजित हुनु राम्रो हो? ११ ............१२................१३..............
यस्ता थुप्रै र आम सरोकारका प्रश्नहरुलाई केलाएर हेर्ने हो र म मात्र हैन कसैले पनि यो उत्तर खोज्न चाह्यो भने सबै प्रश्नको एउटै उत्तर हुन्छ “राम्रो हैन”। आफैले गरेको काम वा कुकर्म आफैलाई राम्रो नलागेर पनि किन यस्तो काम भईरहेको छ? किन यस्तो काम गरिरहेका छन् त? स्वयं चोरलाई, भ्रष्टाचारीलाई, अपराधीलाई आफूले गरेको कामबाट सन्तुष्टि छैन। उनीहरु आफै यो कामलाई ठीक मानेका छैनन्। मन ले नगरौ भन्छ, नगरी छाड्दैनन् वा नगरी हुदैन।
आफू माथि अन्याय परेको छ, कसैले सुन्दैन, आफूमाथि आक्रमण भएको छ, बचाउको लागि पनि त युद्ध लड्नु पर्यो। नचोरेर के गर्नु ? सीप छैन, संगतले त्यही काममा राम्रो ज्ञान भयो, नचोरी खानै पुग्दैन। जती संझाए पनि मान्दैन, दिएको कामनै गर्दैन नकुटेर त हुदै हुदैन शिक्षकलाई।, पास हुनु छ, पास नभए जागिर पाईदैन, जसरी पनि पास हुनु छ, चीटनै चोरेर किन नहोस। तलबले खानै पुग्दैन, मंहगी बढेको छ, जहान केटाकेटी पाल्नको लागि आउने आम्दानीले पुग्दैन, भ्रष्टाचार नगरी नहुने। राम्रो मुखले संझाएर वा सोधेर अपराधी बोल्दैन। नकुटेर त हुदै नहुने र यसो नभए पारनै नलाग्ने पुलिसलाई। पेशानै राजनीति भए पछि उद्धेश्य पुरा गर्न वा कुर्चीमा बसिरहन, खराब किनबेच नगरी नहुने नेतालाई। यी र यस्तै उत्तर पाउछौ हामी यदि किन यो काम गरेको हो त भनेर सोध्यौ भने वा सोच्यौ भने।
नराम्रो काम छ, नराम्रो हो भन्नै थाह छ तर पनि किन यो सबै भईराखेको छ? सबैको जड तत्व भनेको “आत्मविश्वास” हो। नकरात्मक आत्मविश्वासको कारण यसो भइ रहेको छ। यदी सबैकुरालाई सकरात्मक आत्मविश्वासका साथ सोच्ने हो भने सबै कुरा ठीक हुने थियो। आफूलाई निन्तान्तै बाध्यात्मक परिस्थितिले यसो गर्न परेको छ भनेर जति भने पनि यो सबै कुरालाई एउटा सकरात्मक आत्मविश्वासले हेर्ने हो र आफूमा तद्अनुरुप परिवर्तन गर्ने हो भने सबै कुरामा नियन्त्रण सम्भव छ। नचोरी हुदैन भन्ने नकरात्मक आत्मविश्वासलाई, मेहनत गरेर पनि गुजारा गर्न सकिन्छ, सानै काम गरेर पनि संसारका करौडौ मानिसहरु खुसी छन् भन्ने सोच्ने हो भने चोर्न मन लाग्दैन। रक्सीको मातलाई आनन्दको प्रतिक मान्नेहरुले यसले गर्ने हजारौ खराबीलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने, र रक्सी खाँदा मरिन्छ तर नखाँदा मरिदैन भन्ने कुरालाई सकरात्मक आत्मविश्वासकासाथ स्वीकार गर्ने हो भने सायद रक्सी खाएर बिताएका र गुमाएका हजारौ यथार्थताहरु प्रति आफैलाई धिक्कार लाग्ने छ।
खराब मान्छेसंग दुस्मनी गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ तर एउटा असल मान्छेसंग दुस्मनी गर्नु पर्यो भने कति गाह्रो हुन्छ र कति ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने कुराको कुनै सीमानै छैन। यो आत्मविश्वासका साथ कुनै शिक्षकले बिधार्थी माथि राम्रो ब्यबहार गर्ने हो र सकरात्मक आत्मविश्वासका साथ सिकाउने हो भने, कुनै पनि बिधार्थीलाई असल शिक्षकको नजरमा तल झर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सक्दैन। भ्रष्टाचार गर्नु भनेको कुनै निरीह, सोझो र साधारण मानिसको पेट मार्नु हो। यसो गर्दा आफ्नो केटाकेटीको पेट त भरिएला तर पीडित मान्छेको केटाकेटीको गासँ खोसेर, उसका लालाबालाको अनुहारमा भोक र प्यासको नजानिदो अनुभूतिको उपहार दिनु सरह हो भन्नेकुरा सोच्ने हो र मैले राम्रो काम गरे भने र राम्रो सेवा गरिदिए भने, उसले मलाई कहिल्यै पनि भुल्ने छैन, उसको केटाकेटीहरुको हाँसो र खुसी खोसिने छैन भन्ने सोच्ने हो भने सायद भ्रष्टाचार गर्नु त के उसको दिमाखमै आउने छैन यस्तो सोचहरु।
त्यसैले हाम्रो समाजमा भईरहेको जती पनि खराब पक्षहरुको सामाधान माथिबाट कानुन बनाएर वा लादेर हुने छैन। तपाई हामीले जतिसुकै कराए पनि, जतिसुकै नराम्रो भयो भने पनि कुनै परिवर्तन हुनै छैन। त्यसलै एक पटक आखाँ बन्द गरेर सोचौँ, हामीसंग के के खराब कुराहरु छन् र के के असल।तर एउटा कुरा याद गर्न जरुरी छ, सकरात्मक सोच यथास्थितिवादी सोचको लागि भने कहिल्यै हुनु हुदैन। यस्ता कुराहरुको कुनै पनि दस्तावेज वा उदाहरणहरु सकरात्मक हुनै सक्दैन। छानेर, साँधेर वा केलाएर हेर्नु पर्ने हुन्छ हरेक यस्ता उदाहरणहरु। गर्न नसकेर वा भनु आफ्नो पछौटेपनलाई मन बुझाउने असल माध्यम सकरात्मक आत्मविश्वास भने हुनै सक्दैन। त्यसैले आफूबाट हुनु पर्छ परिवर्तन र प्रगतिशीलपनि हुनु पर्छ आत्मविश्वास। समयको सीमा र यथास्थितीवादमा रहने हो भने जतिसुकै सकरात्मक भए पनि पुरानो र कामनलाग्ने खालको हुने छ आत्मविश्वास, यसको साथमा आएका परिवर्तनहरु र सम्पुर्ण परिभाषाहरु।
त्यसैले यो खराब काम हो र यो गर्न हुदैन भन्ने सकरात्मक सोचले मात्र पुग्दैन। यसबाट मुक्ती पाउन सकरात्मक सोच सगै एउटा बलियो समय अनुकूल आत्मबिश्वासको खाचो हुन्छ; अर्थात “सकरात्मक तर प्रगतिशील आत्मबिश्वास”...सबैलाई चेतना भया.......
(प्रयोग गरिएका कुनै पनि शब्द बा भनाईहरु बिल्कुल निरपेक्ष छन्।)
Posted by दूर्जेय चेतना at 10:57 AM
हामी पशु कहिल्यै हुन सकेनौ !!
कर्म गर्नु योग हो, यसमा दुबिधा कसैको पनि छैन। भगवान कृष्णको यो भनाई साह्रै मार्मिक छ र करौडौ मानिस यसलाई आफ्नो जीवनको आदर्श मान्छन्। समाजको परिवर्तित अवस्था यस्तो यान्त्रिक बन्दै गईरहेको छ, मात्र बाच्नकै लागि पनि हरेकलाई आफ्नो कर्म गर्नै पर्छ। चाहेँ असल कर्म होस चाहेँ खराब, गर्न त पर्छ नै। कर्म गरे पछि फलको आशा नगर्नु भन्नै भनाई पनि त्यतिकै प्रख्यात छ। तर पनि यो भौतिक जगत र यान्त्रिक जीवन कुनै पनि कुराको आशा नगरी वा कुनै फलको आशानै नगरी चल्दै चल्दैन; यो पनि वास्तबिकता नै हो। मानिस फगत कर्मको अनेकौ परिभाषामा अल्झेको छ, मुक्ति चाहन्छ तर पनि सक्दैन। मानिस धर्मलाई, कानुनलाई सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन चाहिरहेको हुन्छ र अनेकौ उपमा दिएर आफूले गर्ने कामलाई धार्मिक, कानुनी, सामजिक मूल्य र मान्यता अनुरुप ठान्दछ। हरेकले आफूले गरेको कामलाई सर्बश्रेष्ठ मान्ने गर्छन् र आफूलाई अब्बल दर्जामा उभ्याउछ। सबैले आफूले गरेको काम राम्रो मान्दा मान्दै र आफूले गरेको काम सबै भन्दा उत्तम हो भन्दा भन्दै पनि किन हामी आज मानिस हुन सकेका छैनौ त? मानिस भनेर कसले भन्यो हामीलाई? हाम्रो सभ्यताको इतिहास कसले लेख्यो? मानिसलाई सर्बश्रेष्ठ प्राणीको दर्जा कसले दियो? के के आधारमा हामी मानिस ब्रम्हमाण्डको सबै भन्दा चेतनशील प्राणी भनेर आफैलाई घोषणा गरेका हौ? कुन कुन परिवेशमा हामी चराचर जगतको सबै भन्दा अब्बल दर्जाको प्राणी भयौँ?
मानव जगतले गरेको काम, जसले बनाएको सीमना के का लागि र किन हो भन्ने पश्न मेरो मानसपटलमा आईरहेको छ। कसरी मिल्न सक्छ यो प्रश्नको उत्तर?
हामीले कम चेतनशील भनेका प्राणी वा भनौ जनवारहरुलाई किन कुनै धर्मको आवस्कता छैन? किन कानुनको सीमा छैन?, किन कुनै राज्य र सीमनाको मतलब छैन? किन शून्य भएर बाँचेका छन् उनीहरु? किन उनीहरु आफ्नो धर्मको लागि काटमार गर्दैनन्? किन उनीहरु राज्य र सीमनाको लागि शहिदको खेती गर्दैनन्? किन उनीहरु दाउपेच र छलकपट गर्दैनन्? किन उनीहरुका लागि भगबान कृष्ण, राम, जिसस वा अल्लाहहरुको जन्म हुदैन? किन गीता, बाइबल र कुरान लेखिदैनन् उनीहरुका लागि? किन कुनै स्वर्गको कल्पना र फलको आशा गरेका हुदैनन् उनीहरु? गीता, बाइबल बा कुरान कुनै धर्म ग्रन्थहरु छैनन् उनीहरुका लागि तर पनि उनीहरु भन्दा मानिस किन बढि हिंसात्मक र अराजक? प्रश्न कहाँ नेर अल्झिएको छ? यो कुनै र कसैलाई पनि सरोकारको बिषय भएको छैन आज।
पैसा बा कुनै कुराको लागि गरिने कर्म, कर्म हुन सक्छ तर योग हुन सक्दैन। मनको शुद्धीकरण पहिलो कर्म हो जसले योग र मानव योग्यताको परिभाषा गर्छ। मनलाई राम्रो बनाउनु, आफूलाई असल पात्रको रुपमा उभ्याउनु बास्तबमा पहिलो कर्म हो तर यहाँनेर सबै जना मानव भएर जन्मेकै आधारमा सभ्य र सर्बश्रेष्ठ प्राणीको उपाधि पाइरहेका छन्। जसरी राजाको छोरा राजा हुने गर्थ्यो। मानव हुनु र यो उपमा पाउनु कति सहज र पुर्खौली भएको छ आज। बस मानवको कोखमा जन्म लियो मानिस बन्यो। तर आचरण र व्यवहार भने कुनै पशुसंग पनि तुलाना गर्न नमिल्ने। काटमार, हिंसा, लुटपाट, बलत्कार, शोषण, अन्याय र अत्याचार यी सबै यस्ता मानव सभ्यातकाका गहना भएका छन्, जो मानिसको पुरै अंगलाई कपडाको जस्तै बेरेर बसेको छ। जब सम्म हामी आफ्नो शरिरको यो दुर्गन्धलाई हटाउदैनौ वास्तवमा कतै र कुनै पनि कोणबाट हामी मानिस हुन सक्दैनौ किनकि हामी पशु त कहिल्यै हुन सकेनौ।
जादा जादै एक जना महात्माको कथा यहाँनेर छोटकरीमा राखौ। एक जना मूर्तिको लागि ठूलो ढुंगा कुदिरहेका कारिगरको नजिकै पुगेर एक जना मानिस सोध्छन्; के गर्न लागेको हो तिमिले? कारिगरले जबाफ दिन्छन्: “मैले यो ढुंगाको बाहिर रहेको अनाबश्यक पत्रहरुलाई फाल्दै छु। जब नचाहिने ढुंगाको पत्रहरु फाल्दछु तब मूर्ति त आफै प्रकट भइहाल्छ नि।”
सबैले हाम्रो सभ्यता माथिको खराब दागहरुलाई यसरीनै फाल्न सके बल्ल मानिस हुन्थ्यौ होला।। सबैलाई चेतना भया !!!!
Posted by दूर्जेय चेतना at 3:51 AM
वाह!!!! ठुल्दाईको टिभी र “कसौटी जिन्दगी” ।
गाईजात्रा त के मनाउने खै, मनाउदै गयो, मान्दै गयो उस्ताको उस्तै। कति मात्रै मनाउने भन्दा पनि कसरी मनाउने भन्ने मै समय जाने भो । के बाट मनाउने, कसबाट सुरु गरेर मनाउने, कहाँबाट मनाउने नै समस्या। कुनै कतै ठाउँ बाँकी भए पो यहीबाट मनाउँ भन्न हुन्थ्यो। सबै तिर उस्तै भद्रगोल भएर होला गाईजात्रा सुरु गर्नै आएन। सोच्दा सोच्दै जानै लागिसक्यो यो चाड तर पनि मेरो मनमा हजारौ ठाउँहरु छन् गाईजात्रा मनाउने। मूल कुरो चाहिँ कुन कुराबाट सुरु गरौ पो भयो त। हास्दै पनि भन्दै पनि भयो भने गाईजात्राको मजा हुन्छ रे। भनिरह्यो भने पनि नहुने, हासिरह्यो भने पनि नहुने। दुबै एकै पटक हुनु पर्ने रे। सिधा कुरा पनि गर्न भएन फेरि। गर्‍यो भने कसैले नपत्याउने होला। गाईजात्रा न पर्‍यो। त्यस्तै भयो आज मलाई। तर म सुन्दै पनि थिए, पठ्दै पनि थिए र हास्दै पनि।
“रामे।।ए रामे..... कता मरेछ यो” सानदाई घाँटी सुक्ने गरि कराउदै थिए। पल्लो ठुल्दाईको घरमा कसौटी हेरेर बसिरहेको रामेलाई बाबुको बोलाईले जर्‍याकजुरुक बनायो। “हैन यो पानीमन्तरे कता मरेछ” सानदाई अझै कराउदै थिए।
“हजुर बा म यही छु” रामे हातमा चप्पल लिएरै उभियो। त्यसो त उसको बुबाले बोलाउने पालो पनि निकै दिन पछि आउने गर्थ्यो उस्को। “जा न तल पधेराबाट एक गाग्री पानी लिएर आइज, भित्र के के हुदैछ, पानी चाहिन्छ होला” सानदाई रामेलाई रित्तो गाग्रो दिदै थिए। भित्र के के हुदै छ? पानी चाहिएला? रामेले कुरा बुझेन होला तर केही नबुझे पनि के गरोस, गाग्री बोक्दै थियो उ, भित्रबाट सुडेनी आमाको आवाज आयो। सुडेनी आमाको आवाज रामेलाई नौलो हैन, धेरै पटक सुनेको छ उसले त्यो घरमा त्यसै गरी। “ल बधाई छ सानदाई फेरि छोरा भयो” सानदाई खिस्स हासेँ, रामेले कुरा बुझ्यो। हैन बा हाम्रा यत्रो धेरै भाई र बहिनी किन भएका? रामेले सोधेरै छाड्यो। सानदाईले के भन्ने अब खै, तर पनि उनले भनिदिए “तैले यस्तोकुरा बुझ्दैनस जा पानी लिएर आईज” कुरा टार्न खज्दै थिए सानदाई तर रामेले छोड्नै मानेन। धेरै दिन पहिलैबाट सोध्न खोज्दै थियो होला ... भन न बा भन किन हो? “ईईईईई उता जा त, त्यती पनि बझ्दैन नाथे। तिमीहरु पल्लो घरमा टीभी हेर्न जान्छौ हाम्रो घरमा छैन।।। जा जा पानी लिएर आईज। सानदाईले भनिहाले। रामेले “भन न बा भन” भन्दै थियो अझै। खुब हाँसे म पनि……..बेकुफ मेरो पानीमन्तरे भतिजो र वाह ठुल्दाईको टिभी र “कसौटी जिन्दगी” ।
अरू बेला भन्दा के हो के हो गाईजात्रकै मौका छोपिहाले ।
Posted by दूर्जेय चेतना at 11:11 PM
कुन दिन सम्म, कुन हद सम्म यो सिलसिला चल्ने हो?
हामी सभ्यताको त्यो कालखण्डमा उभिएका छौ जो कुनै पनि मानब सभ्यताका लागि नहुने हैन तर यति भयानक शायदै हुन्छ होला। ईतिहासको हरेक पानामा हामीले हेर्दै जाने हो भने, संसारमा मानव ताको बिकासक्रममा दिनप्रतिदिन प्रगति र बिकासको दौड भईरहेको हुन्छ। कुनै पनि समाजको बिकासमा हरेक तप्काको आफ्नै योगदान र क्रमिक प्रगति देख्न पाईन्छ। हरेक देश वा समाजले आफूले पाएको हरेक समयलाई पूर्णरुपमा यसरी सदुपयोग गरेको हुन्छ कि हरपल ब्यबस्थित र अनुशाशित सभ्यताको बिकास होस। जुनसुकै पनि देश वा राष्ट्रको निर्माण सगै अनेकौ दुखद घटनाहरुले स्थान पाएको हुन्छ तर पनि अब्यबस्था बाट ब्यबस्थातिर, छरपष्ट समाजबाट समालिदो समाज, हत्या हिंसाबाट शान्त र मर्यादित समाज कुनै नौलो पद्वति हैन। हरेक राष्ट्रले यो सिलसिलालाई आत्मसाथ गरेको हुन्छ।
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत होस वा बिकासको चरम उचाईमा पुगेको भनिएको अमेरिका नै किन नहोस, हरेक पटक अशान्त, परनिर्भरता र असभ्य समाजको ईतिहासको सुरुवात सगै, क्रमस बिकाश हुदै आएको कुरा सबैलाई थाह भएकै कुरा हो। तर हाम्रो देश आज बिलकुल विपरीत बाटोबाट गुज्रिएको छ। गरिब तर केहि हदसम्म शान्त र व्यवस्थित समाजबाट हरेक दिन अव्यवस्थित, अशान्त र छरपष्ट समाजको बिकाशमा लागेका छौ। चाहेँ कानुनी ब्यस्था होस, चाहेँ राजनैतिक स्थिरता, चाहेँ सामाजिक सुरक्षा नै किन नहोस जताततै एकनासले लथालिङ्ग र काम्लोमा पोखिएको सातु जस्तो गोलमाल मात्रै भएको छ।
आज जो कोहि नेपालीलाई देशको माया छ र गर्छन, सानो भन्दा सानो घटनाक्रमले हरेक नेपालीलाई संवेदनशील बनाएको हुन्छ र देशको यो हालत प्रति निकै दु:खी हुने गर्छौ तर पनि हामी किन एक छैनौ?
विगत केही समय यता हाम्रो समाजमा घटेका सानातिना घटनाक्रमलाई हेरौ र आफैमा प्रश्न गरौ।
हामी कुनै शिक्षकलाई शरीर भरि रगत जम्नेगरि निलडाम बनाई मरणाशन्न हुनेगरि कुट्छौ, भोलि पल्ट दोषीहरुको अबिर जात्रा हुन्छ र समाजमा ईज्जतका साथ पुनर्आगमन हुन्छ। यस घटनाको दोषी को हो? वा को माथि अन्याय परेको छ? ब्यक्ती बिषेश द्वारा वा ब्यक्ती माथि परेको अन्याय भन्दा पनि हामीले मान्दै आएको कानुनी राज्यको अबधारणा माथिको प्रश्नचिन्ह हो यो। हामीले के आशा गर्ने यो पद्धतिबाट?
राज्यले एकै मुद्वाका तीन दोषीहरुलाई गिरफ्तार गर्छ। तीनै जनालाई एकै प्रमाण र एउटै अभियोगमा एकै कानुनी धाराको हबला दिएर कारबाही अगाडि बढाउछ। तर नाटकीय पराकाष्ठा यो हैन। त्यी मध्य एक जसको समाजिक पहुँच छ, जसको ठूला भनाउदाहरुसंग पहुँच छ, जसको राजनैतिक पहुँच छ, उसलाई राज्यको कानुनको सुबिधा फरक हुने गर्छ। अदालतमा तारीख बोक्ने दिन, उ कारबाट यसरी आउछ कि उसलाई कुनै हिनताबोध छैन। तारेख थामेर यसरी बाहिरिन्छ कि मानौ कुनै पुरुस्वार्थ गरेर फर्केको छ। तर त्यी मध्य दुई जना जसको कुनै पहुँच छैन उनिहरु प्रहरीको हातकडी सहित उपस्थित गराईन्छ। लागिरेछ कि कानुनले कुनै नाटक मञ्चन, गरिरहेको छ।
कुनै राजनैतिक कार्यकर्ताको हत्याको आवेगमा देशनै, समाजनै ठप्प हुनेगरी बन्द गरिन्छ। तोडफोड गराईन्छ। अस्पताल जान लागेका डाक्टर माथि दूरब्यवहार गरिन्छ, उनको वाहन जलाईन्छ। कुनै उमेर को हद हुदैन गलत ब्यबहार गर्न र आतङ्कित बनाउन। कयौ बिरामी बाटोमा अलपत्र पर्छन, हरेकले सास्ती भोग्नु पर्छ। तर दुर्भाग्य त्यसको भोलिपल्ट आत्महत्या हुन सक्नेगरी बिष सेबन गरेको आसयको पोष्टमार्टमको रिपोर्ट आउछ्। आन्दोलन बन्द हुन्छ। फेरि कसैमाथि कारबाहीको त कुरै छाडौ, आफूबाट गल्ति भयो भन्ने समेत कुराको कतै कुनै कुरा सुन्नमा आउदैन।
५-६ बर्ष अगाडि कुनै नेताले अदालतलाई दरबार भित्र लगे हुन्छ भन्ने बिषयलाई लिएर मानहानीको मुद्दा चल्छ। ५-६ बर्ष अगाडि भनेको कुरा तन्कालिन ब्यबस्था र परिस्थिति संग अहिले कुनै कुरा नमिल्ने भएकाले मानहानीको मुद्दाबाट सफाई दिईन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, के अदालत त्यही हैन? त्यहि बेन्च, त्यही स्थान, त्यही कानुन मान्ने अदालत तर कसरी फरक हुन गयो आज? अदालतको मानहानी सम्बन्धित परिभाषा के फरक भएको हो? यसको मतलब अदालतले भन्नुपर्छकी, ५-६ बर्ष पहिला यसले सही र यथोचित न्याय संपादन गर्न सकेको थिएन। नत्र अदालतको मानहानी वा अदालतको अपमान स्बतन्त्र र निष्पक्ष रहेको अबश्थामा समय सापेक्ष कसरी परिवर्तन हुन पुग्यो?
ख्याती श्रेष्ठको हत्या प्रकरणसंगै उनलाई न त समाजले न त कानुनले, न त कानुनको रखवालाले बचाउन सक्यो। कानुन माथिको बिश्वासको कमि र अनुसन्धानको तरिकाको कमिले गर्दा श्रेष्ठ परिवारले एक असल छोरीमात्र हैन, समाजले विलक्षण प्रतिभाकी धनी, सुन्दर र सभ्य नागरिक गुमाउन पुग्यो। हत्याको अनुसन्धान वा तहकिकात कुन हद सम्म निम्न स्तरको छ भन्ने कुराको यथार्थता प्रष्ट हुन पुग्यो जब कानुकका अधिकारीद्बारा पैसा दिने कागज गरेर ख्यातीको शरीरका अंगहरु फेरी हत्याराबाटै किन्ने काम भयो। आशा छउन्जेल ख्यातीको परिवारबाट १० लाख लिएको हत्यारा, कानुनको दाएरा भित्र आउदा समेत कानुनका रखवालाहरुसंग ख्यातीको शरीरका अंगहरुको ब्यापार गर्दे छ। बैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न छोडेर ईमोसनल ब्लायकमेल गर्न आतुर यी कानुनका रखवालाहरु फेरि कानुकमाथि बलात्कार गर्दै छन् । यी त केही चर्चामा आएका कुरा मात्र हुन् । मेरो प्रश्न त्यसता अनेकौ कुराहरुमा हुन् जहाँ, हरेक पटक एउटा न्यायको आशा गरिएको हुन्छ जो न्याय एक नेपाली मात्र भएर सम्पादन होस।
कुनै यस्तो स्थान छैन, जहाँ कसैको मन नदुखेको होस, तल्लो भन्दा तल्लो स्तर देखि सिंहदरबार सम्मको यो अराजकता कहिले सम्म चल्ने हो? के यो देशले अझै यो भन्दा पनि अराजक र अब्यबस्थाको नियती भोग्न बाँकी छ? कसले बिचार पुराउने यसकुरा मा खै? “कलियुग लागे पछि घर घरमा राजा हुने छन्” भन्ने धार्मिक अभिब्यक्ति के साचो हो त? कलियुग के नेपालमै मात्र हुने हो र? नारायणहिटीको एक श्रीपेचको अवसानसंगै हरेक गाँउको हरेक घरमा हजारौ र करोडौ नयाँ श्रीपेचको उदय के यसै भएर राजेन्द्र ज्ञवालीले भन्नु भएको हो त?
आज हाम्रो नियति यसरी बिग्रिएको छ कि, एक आम नागरिक आफूलाई परेको अन्यायबाट मुक्ति पाउन कहाँ जाओस। कुनै यस्तो संस्था वा ब्यत्ति छैन जहाँ एक नेपाल र एक नेपालीको भावना मिलोस, जहाँ राजनैतिक मुद्दा भन्दा माथि उठेर नेपाल र नेपालीको हितमा न्याय सम्पादन होस। अब त हाम्रो नियती यस्तो बन्दै छ, केही नभएसम्म देशमै बस, अन्याय भोग्नु पर्यो भने आफूमाथिको अत्याचार भुल्न बिदेशिनु बाहेक कुनै बिकल्प छैन् । कुन दिन सम्म, कुन हद सम्म यो सिलसिला चल्ने हो? यस्तो नहोस अब र हामी हाम्रो हरेक कुरामा नियन्त्रण आफैले गर्न सकौं नकि फेरी नियन्त्रण गुमाएर कुनै पराईको गुलाम हुन नपरोस। सबैलाई चेतना भया।।।।।।
Posted by दूर्जेय चेतना at 1:24 AM
टेलिभिजनको भाषा किन यस्तो सस्तो? “ प्वाक्क मुखमा ह...